कसरी हुन्छ खराब मिर्गौला ननिकाली अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण ? - Himali Patrika
कसरी हुन्छ खराब मिर्गौला ननिकाली अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण ?
हिमाली पत्रिका २१ फाल्गुन २०७६, 11:26 am
टिस्यु क्रसम्याच पोजेटिभ भयो कि नेगेटिभ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । क्रसम्याचिङ पोजेटिभ भयो भने प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन । मिर्गौला दिने र लिने व्यक्तिको टिस्यु क्रसम्याच नेगेटिभ भयो भने प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मिर्गौला दाताको शरीरमा किटाणु छैन, कुनै स ङ्क्र मण भएको छैन र कुनै सरुवा रोग लागेको छैन भने प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि कि टाणु वा कुनै स ङ्क्रमण भेटियो भने प्रत्यारोपणले काम गर्दैन ।